ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံသားတွေကို ပိုးသားလေးအသွင်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Super Moisture Shampoo! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံသားတွေကို ပိုးသားလေးအသွင်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Super Moisture Shampoo!
ဆံကေသာဆိုတာ ကျွန်မတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထား၊ အထွတ်အမြတ်ထားကြတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆံသားလေးကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး နက်မှောင်နေစေဖို့ရန်ဟာ ကျွန်မတို့မြန်မာမိန်းကလေးတွေ မက်တဲ့အိမ်မက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆံသားတွေကျန်းမာသန်စွမ်းနေစေဖို့ရန်အတွက် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ Product မျိုးကိုသာရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အရည်အသွေးပိုင်းမှာ ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရထားတဲ့ Briogeo ဟာဆိုရင် ကျွန်မတို့ဆံသားလေးတွေနူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီး ကျန်းမာနေစေဖို့ရန်အတွက် Super moisture shampoo ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒီ shampoo ဟာ ဦးရေပြားရှိ ဆဲလ်သေတွေနဲ့ ဂျေးညှော်တွေကို ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးနိုင်ရုံသာမက ဆံသားအတွင်းဆုံးပိုင်းအထိ ရေဓာတ်ကိုလည်း ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဆံသားလေးဟာ စိုပြေပြီးတောက်ပြောင်နေပြီပေါ့။ ဆံပင်အရောင်ဆိုးထားလို့ ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံသားတွေကိုလည်း ပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အပြင် ဆိုးထားတဲ့အရောင်ကိုပါ အရောင်ထွက်အားကောင်းစေတာကြောင့် အသုံးပြုသူတိုင်းနှစ်ခြိုက်မှာ အမှန်ပါပဲ။ အသုံးပြုပြီးနောက်မှာ ဆံသားလေးဟာ အိစင်းပြီး သဘာဝအတိုင်းလှပနေစေမှာဖြစ်လို့ ဆံသားလေးနူးညံ့ပြီး အိစင်းနေချင်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ မရှိမဖြစ်ပဲနော်။ အထူးသဖြင့် ဆံကေသာကို အပြောင်းအလဲလုပ်ခြင်းကို နှစ်သက်ခုံမင်တဲ့သူတွေအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Shampoo အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆံသားနဲ့ ဦးရေကိုထိခိုက်စေနိုင်မယ့် အရာများပါဝင်ခြင်းရှိမရှိကိုလည်း စစ်ဆေးအောင်မြင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်။ ပုံမှန် ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Conditioner တမျိုးမျိုး ဒါမှမဟုတ် Don’t Despair, Repair Series ထဲက Conditioner ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ကို ပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။